Gbasara Anyị - Nantong Guosheng Intelligence Technology Group
Nantong Guosheng Intelligence Technology Group (nke akpọrọ Guosheng Group ugbu a) nwere ọtụtụ ndị enyemaka gụnyere Guosheng Intelligence Technology, Guosheng Precision Machines, Componision Machine Guosheng, Suzhou Zhonggu Industrial, Dawei Precision Technology (njikọ aka na Taiwan), na Investa (Sino-German) imekọ ihe ọnụ wdg Guosheng Group anọwo na-elekwasị anya na ngalaba nrụpụta igwe ruo ihe karịrị afọ iri abụọ.
Ime ihe n’eziokwu
Azụmaahịa ụlọ ọrụ sitere na ngwa ihe eji eme ihe dị elu, nke gụnyere gụnyere nkedo na akụkụ akụkụ ịgbado ọkụ mpempe akwụkwọ, nke ewelie ma gbasaa n'akụkụ abụọ kachasị afọ na afọ. Site n'inye nkenke mpempe mpempe akwụkwọ metal maka CNC igwe eji arụ ọrụ dị elu, akụrụngwa ntụtụ na ndị ọrụ injinia dịka Demagisson Seiki, Canada Husky, Germany Bomag, wdg, anyị ewepụtala mmekọrịta dị n'etiti anyị na ndị ahịa dị elu, na-agbasawanye ndị anyị azụmaahịa maka ihe ndị ọzọ dị elu dị na akụrụngwa akụrụngwa dị ka igwe eji akpụ akpụ akpụ. N'otu oge ahụ, a na-agbanwe mpaghara igwe anaghị emepụta CNC site na igwe ọrụ gaa na akara ngosipụta nke igwe zuru oke, na-etolite ma na-emepụta CNC vetikal machining center, gantry machining center, na igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ na-egwe ọka, CNC lathe, ntụgharị na-akpụgharị n'etiti, yana ebe a na-ejikọ ọnụ njikọ ise. Otu a aburula onye okacha amara nke nwere otutu igwe igwe ndi CNC na igwe ihe eji eme otutu ihe. A na-eji ngwa eji eme ihe nke igwe, igwe, ụgbọ ala, ike, ụgbọ mmiri, igwe injin, ihe elektrọnik 3C na mpaghara mmepụta. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ụlọ ọrụ gantry machining dị iche iche na igwe na-agbagharị agbatị, nwere ike dochie mbubata mbubata, nke kwalitere mmepe nke ụlọ ọrụ na-agbadata na akụ na ụba ụlọ ọrụ metụtara ya.
Guosheng Group na-agbaso site na ntinye aka nke "ime ka obodo jupụta mba site na ime ka ọrụ bụrụ ihe ịga nke ọma", na-ewere "ịghọ onye nrụpụta nke akụrụngwa nwere ọgụgụ isi kachasị mma na China" dị ka ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-agbaso ụkpụrụ isi nke "ịkwụwa aka ọtọ, mma. ịdị uchu na ngbanwe ", na -eme ka ndị ahịa nwe nnukwu uru, na-ekerịta mmepe na ndị ọrụ, ndị mmekọ, ndị na-eketa oke na ọha mmadụ, ma na-ebute ọnọdụ mmeri n'ọdịnihu.
Thelọ ọrụ nne na nna Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd, nke nwere isi obodo ndebanye aha nde nde iri isii, bụ ụlọ ọrụ dị elu nke mba, otu n'ime ụlọ ọrụ Top 30 dị na ụlọ ọrụ akụrụngwa igwe China, ụlọ ọrụ na-enweghị atụ dị na Jiangsu Province na ulo oru ohuru na mpaghara Jiangsu. Companylọ ọrụ ahụ ehiwela ụlọ ọrụ teknụzụ injinia na nke ime obodo, ụlọ ọrụ teknụzụ ụlọ ọrụ Jiangsu na ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ nke Jiangsu. O nwere otutu ndi injinia na ndi oru ya, wee merie otutu ndi cheputara ihe omuma ha. Ngwaahịa ahụ enwetala ihe nrite nke Jiangsu Science and Technology Progress Award, ihe nrịba nke mbụ na nke abụọ nke Nantong Science and Technology Progress Award. Companylọ ọrụ ahụ emeela ọrụ ndị agbanweela nke nnukwu arụmọrụ sayensị na teknụzụ na Jiangsu Province, yana nnukwu ọrụ sayensị na teknụzụ nke Nantong City, wdg.